Muuse Suudi oo dhaliilay Ra’isul Wasaare Rooble, talana u soo jeediyay ciidamada – – AfmoNews
Muuse Suudi oo dhaliilay Ra’isul Wasaare Rooble, talana u soo jeediyay ciidamada –
Senator Muuse Suudi Yalaxow oo ka mid ah Senatarada Aqalka Sare ayaa ugu baaqay ciidamada Soomaaliyeed inaysan dalkooda burburin oo aan loo isticmaalin in shacabkooda ay laayaan,hase yeeshee waxa uu Xaaji Muuse Suudi si weyn u dhaliilay siyaasada Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble.
Muuse Suudi Yalaxow oo maanta ka hadlayay magaalada Muqdisho ayaa ugu horeyn ka hadlay arrimaha ciidamada iyadoo dhowaan ay soo baxayeen warar sheegayay in dowlada federalka ay diyaarisay ciidamo ay si gaar ah uga howlgalayaan doorashooyinka dalka.
Senator Muuse Suudi ayaa sheegay in ciidamada dalka ay yihiin kuwo suga ammanka dalka balse loo baahan yahay inaysan amarada qaldan qaadan oo ay ka fikiraan ficilada ay sameynayaan.
Xaaji Muuse Suudi ayaa ka digey in ciidamada qaranka loo adeegsado si gaar ah, oo dad gooni ah loo bartilmaameedsado.
“Dalkan ciidamadiisa ayaa tihiin,marnaba shaqo la’aan idinkuma dhacayso haddii uu farmaajo iska tago,muuse suudi iska tago, idinku waad joogeysaan mushaarna ma weyneysiin, idinka dalka ha burburinina fahad oo qori sitana filan meyno.”ayuu yiri Senatorka oo ka hadlayay in ciidamadu marwalba ay baaqi ahaanayaan haddii maamulku uu isbedelo.
“Ninka qoriga qaadi karo dalkaan reebta,amarka mid yaan la qaadan ayaa jiro,qofka aad dishaan idinkaa la idinku marqaati furaa,farmaajo diyo idinka bixinayo,haddad wax dishaan dalkiina iyo dadkiina ayaad gubteen.”ayuu sii raaciyay Senatorka.
Muuse Suudi ayaa si gaar ah waxa uu ula taliyay ciidamada Haramcad iyo Gorgor oo uu ugaga digey inay degdegaan isagoo xusuusiyay inay wax walba oo dalka ka socda ay ka warhayaan.
Shirkan jaraa’id ayuu Muuse Suudi si weyn ugu dhaliilay Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble isagoo ku tilmaamay inuu yahay Ra’iisul Wasaare hal beel ah.
Isagoo ka hadlayay doorashada ayuu ku sheegay in labo beel ay doonayaan inay doorasho qabtaan,waxana uu si gaar ah u sheegay in Madaxweynaha Galmudug Qoorqoor iyo Ra’iisul Wasaare Rooble ay ku dhowaaqeen doorashada balse madaxdii wakiilada ka ahaa Hirshabelle,Koofurgalbeed iyo gobolka Banaadir aysan ka hadlin wax doorasho ah balse ay ahaayeen kuwo goobjoog ahaa goobtii loogaga dhowaaqayay.
“Ra’iisul wasaaraheen annaga in uu Hiraab u yahay ra’iisul wasaare uma malaynin balse Soomali oo dhan inuu ra’iisul wasaare u yahay ayaan u malaynaynay,aad ayaan ugu hanweyneyney waa lagu ceymanaa ayaan islahayn laguma cayman.”ayuu yiri Muuse Suudi.